Ampidino Crazy for Speed 2 APK ho an'ny Android
Ampidino Crazy for Speed 2
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Android (77.00 MB)
Ampidino Crazy for Speed 2,
Crazy for Speed ​​2 dia anisanny lalao hazakaza-tsoavaly fiara tsara indrindra ambaninny 100MB aminny finday. Izy io dia lalao hazakaza-piaran-dalamby tsara tarehy izay manolotra maodely ho anny kariera lalinanao, izay ihazakazanao aminny fanoherana ny fifamoivoizana, raiso ny fanadinana fahazoan-dàlana aminny mpamily, mifaninana aminny làlana sarotra aminny fiara tsy mataho-dalana. Ankoatrizay, maimaim-poana ny misintona sy milalao!
Crazy for Speed ​​2. Lalao hazakazaka fiara kalitao AAA izay manolotra sary avo lenta ho anny habeny, ahitàna ireo fiara modely farany avy aminireo mpamokatra malaza indrindra, na dia tsy nahazo alalana aza, ary manidy anao eo aminny efijery aminny fiara maimaim-poana sy lalao sarotra. mode, Crazy for Speed ​​2. Ankoatrizay dia mihazakazaka aminny làlana mampidi-doza indrindra ianao. Làlana an-tendrombohitra Alpes, làlana amoron-tsiraka Venise, làlana lao any Nevada, lalana feno fotaka any Amazon, làlana asfalta Monaco, làlanny tanànanny Tokyo, làlambe misy ranomandry Himalayan, làlambe alina any Londres ary miditra aminny hazakazaka tompon-daka aminny toerana tsy takatro ianao. Azonao atao ny mandondona ireo mpanohitra anao aminny fikapohana azy ireo. Tsy manana sidekick ianao izay manome anao ny ambony ankoatranny nitro.
Crazy for Speed ​​2 endri-javatra:
Sary an-tsary, fizika, vokam-peo
Fizarana tsy mampino miaraka aminny fiara tsy mataho-dalana
Ny lalao lalao fanadinana fahazoan-dàlana sy ny karazanasa
Fanavaozana fiara mitohy sy haingana
Haben'ny rakitra: 77.00 MB